“Gunnimo ayay nagu tahay in la is xirto dad ganacsi noogu yimid!” – Coldoon oo sheegay in baad loo haysto milkiilaha Astaan TV | Hadalsame Media
Home Wararka “Gunnimo ayay nagu tahay in la is xirto dad ganacsi noogu yimid!”...
“Gunnimo ayay nagu tahay in la is xirto dad ganacsi noogu yimid!” – Coldoon oo sheegay in baad loo haysto milkiilaha Astaan TV
(Burco) 05 Nof 2020 – Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ka mid ah gayfanayaasha caanka ah ee woqooyigs dalka ayaa aad u dhaliilay xabsiga iyo xukunka milkiilaha Astaan TV.
Coldoon oo hadlayey isagoo ku sugan Degmada Burco si cad u tilmaamay in milkiilaha hilinka Astaan TV, Cabdimanaan Yuusuf, “baad lagu haysto”.
“Reer Soomaaliland Gunnimo ayey nagu tahay in shakhsi deegaankaan ganacsi u yimid la iska xirto oo baad la weydiisto, halka reer Soomaaliland ay si xor ah ugu ganacsadaan Soomaaliya.” Ayuu yiri Coldoon.
Maxkamadda Maroodi Jeex ayaa Cabdimanaan ku xukuntay 5 sano oo xabsi iyo balaayiin shilin oo ganaax ah.
Coldoon ayaa laftiisu wuxuu muddo u xirnaa nidaamka halkaa ka jira oo usii xuub siibanaya maamul kali talis ah.
Previous article“Mushaarka billaha ihi wuxuu kaa hor istaagayaa inaad faqiir iyo taajir midkood noqoto!!” – Jack Ma
Next articleRW Abiy Ahmed oo ka hadlay arrin aan horay loo ogayn oo uu eedeeyey ciidan goboleedka Tigreega